गम्भीर प्रश्न ! 02 र 20 ले जुनसुकै पाइलट सजिलै झुक्किन सक्छन्, किन राखियो त्यस्तो नम्बर ? « Sajha Page
किन राखियो पाइलटलाई झुक्याउने नाम ? गलत नाम गलत परिणाम म एउटा अनुभव सेयर गर्न चहान्छु । मैले सन् २०१३ तिर कतारमा एउटा स्पेनिस कम्पनीको लन्ड्रीमा (Pressto) अप्रेशन सुपरभाइजरको जागिर गरेको थिएँ । जँहा दिनमा १२ सयवटा सम्म कपडा आउँथ्यो । मानौँ, एक ग्राहकको १० वटा कपडा छ भने हामी एउटै नम्बर राखेर मार्किङ् गर्थ्यौँ ।
मिनबहादुर पण्डितले हाम्रो फेसबुक पेजमा गरेको कमेन्टलाई हामीले सम्पादन गरेर ब्लगका रुपमा यहाँ प्रकाशित गरेका छौँ-सम्पादक । – अन्नपूर्ण पोस्टबाट